Soosaaraha Dhalooyinka Caaga ah ee Xirfadlaha ah | Fukang
Ku saabsan Fukang
Soo saarista dhalada
Dhalada Xayawaanka Daawooyinka
Weelka cuntada caaga ah
Caagagga Xawaashka ah
Shimbiraha Caagga ah
Dhalada caaga ah ee Hdpe
Qurxinta kareemka kareemka
Waxaan ku takhasusnay soo saarista iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee dhalooyinka PET iyo HDPE. kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, dhammaan agabku waa heerka cuntada oo ay dhaafeen shahaadooyinka FDA, EU, LFGB.
Fukang Caaga Cunnada weel shukulaatada looska ah weel
Dhalooyinka lowskaWeel caag ah oo xawaash ahDhalo macaan oo caag ahWax soo saarka dhalooyinka iyo koofiyadaha way kala duwan yihiin, dhalada PET waxay u baahan tahay inay soo saarto embriyaha marka hore, ka dibna adeegso tignoolajiyada afuufista si ay u soo saarto dhalooyinka, daboolku waa hal tallaabo oo kaliya oo la isku duro.
Fukang Condiment dhalo xawaash weel milix ah Booqday Furimaha Dagaalka
Dhalooyinkan maran ee xawaashka ah ayaa ah xalka ugu fiican ee lagu kaydiyo laguna isticmaalo xawaashka bulk Myspice, geedo yaryar iyo xoqida BBQ. Ka samaysan polypropylene cad (PET) kaas oo u hoggaansan FDA, waxaanu haynaa dhalooyin xawaash ah oo qaabaysan iyo cabbir kala duwan, sida 2oz, 3oz, 4oz, 5oz, 6oz, 8oz, 10oz, 16oz, 32oz, iyo tKoofiyadaha balaastikada ah waxay la yimaadaan Shaabad cusub oo ku ilaali uunsigaaga hawo ilaa cimri dheer. Summadaada waxa lagu dhejin karaa dhalada ama daboolka adiga oo daabacan, calaamadeynaya ama dhejinaya
Fukang PET daryeelka caafimaadka dhalada dawada dhalada weelka isticmaalka dawada
Dhalada daryeelka caafimaadka PETsoosaarayaasha dhalada daawadadhalooyinka spplementXor baad u tahay inaad nala soo xidhiidho!Waxaan nahay Fukang Plastic Products CO., LTD, waxaan aasaasay 2006 oo aan leenahay khibrad dhoofinta badan, waxaan kaa caawin karnaa wax walba oo ku saabsan soo dejinta Shiinaha, waxaan leenahay warshad noo gaar ah, oo waxaan soo saari karnaa 1500000 xabbadood maalin kasta.
Wax soo saarka dhalooyinka iyo koofiyadaha way kala duwan yihiin, dhalada PET waxay u baahan tahay inay soo saarto embriyaha marka hore, ka dibna adeegso tignoolajiyada afuufista si ay u soo saarto dhalooyinka, daboolku waa hal tallaabo oo kaliya oo la isku duro.Xor baad u tahay inaad nala soo xidhiidho!
Fukang 120ml caag PET ah isticmaalka daawada dhalada weel kaniini kaniini ah oo leh soosaarayaasha fur furka
Ku saabsan FukangDongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd la aasaasay 1999, oo ku yaala Guangdong, Shiinaha oo daboolay 9000 mitir oo laba jibbaaran. Waxaan ku takhasusnay soo saarista iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee dhalooyinka PET iyo HDPE. kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, dhammaan agabku waa heerka cuntada oo ay dhaafeen FDA, EU, LFGB shahaado, iyo alaabtayada waa mid aad caan u ah Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newland, Mexico, Philippine iwm hdpe iyo PET dhalooyinka dawada waxaa loo isticmaalaa xirxirida alaabta daryeelka caafimaadka, nafaqeynta, kaabsalka, kaniiniyada iyo kaniiniyada, iwm dhalooyinka cuntada PET waxaa loo isticmaalaa in lagu daro noocyada kala duwan ee cuntada, sida nacnac, kukiyada, shukulaatada, lawska, subagga lawska iyo Xawaashyada, iwm Dhalooyinkayada caagga ah waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedo gaar ah, sida saacada baakadaha, funaanad, alaabta lagu ciyaaro, hadiyado, dahabka, qalabka waraaqaha iyo alaabta elektarooniga ah Waxaan sidoo kale bixinaa adeegga OEM, sida samaynta caaryada cusub iyo daabacaadda calaamadda macaamiisha. design Waxaan si daacad ah kuugu soo dhawaynaynaa inaad nala shaqeyso.
Fukang 100ml PET caag ah matt isticmaalka dawooyinka dhalada oo leh alaab-qeybiye dabool leh
?Waxaan bixinay adeegga OEM/ODM wax soo saarka muddo 23 sano ah. Si kasta oo ay shuruudahaagu yihiin, aqoontayada iyo waayo-aragnimadayada ballaadhan ayaa kuu xaqiijinaysa natiijo lagu qanco. Waxaan bixinaa dadaalkayaga ugu badan si aan u bixino adeeg tayo wanaagsan, qanacsan, qiimo tartan ah, gaarsiinta waqtiga loogu talagalay macaamiishayada qiimaha leh.
weydiin:Macaamiishu waxay sheegaan qaabka la rabo, qeexida waxqabadka, meertada nolosha, iyo shuruudaha u hogaansanaanta.
Naqshad:Kooxda naqshadeynta ayaa ku lug leh bilawga mashruuca si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee alaabta loo qaabeeyey si ay ugu habboonaato baahiyaha macaamiisha.
? Maareynta Tayada:Si loo bixiyo qaab-dhismeedyo tayo sare leh, waxaan ilaalineynaa wax ku ool ah& Nidaamka Maareynta Tayada hufan.
Midabka gaarka ah
Xidhiidhka wada shaqayneed ee dhow ee lala leeyahay macaamiisha waxa ay awood u siinaysaa kooxdayada in ay bixiyaan adeeg badheedh ah oo aan midna ahayn.
Haddii aad leedahay naqshad adiga kuu gaar ah, ku soo dhawoow inaad noo soo dirto nashqadaada ama muunadaada, waxaanu samayn karnaa sida codsiyadaada gaarka ah.
Astaanta gaarka ah
Summadaada waxaa lagu dhejin karaa alaabtaada iyadoo lagu dhejin karo shaabad kulul, daabacaadda xariirta xariirta, dhejinta, daahan UV, dhejis ama filim yar yar.
Iyadoo 23 sano oo waayo-aragnimo ah
Waxaan leenahay koox xirfad leh
Waxaa laga iibiyay 56 wadan oo caalamka ah
Warshada 9,000 mitir oo laba jibbaaran
KU SAABSAN? FUKANG
Dongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd la aasaasay 1999, oo ku yaala Guangdong, Shiinaha oo daboolay 9000 mitir oo laba jibbaaran.
Waxaan ku takhasusnay soo saarista iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee dhalooyinka PET iyo HDPE. kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, dhammaan agabku waa heerka cuntada oo ay dhaafeen FDA, EU, LFGB shahaado, iyo alaabtayada waa mid aad caan u ah Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newsland, Mexico, Philippine iwm ...?
Kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, dhammaan agabku waa heerka cuntada oo ay dhaafeen FDA, EU, LFGB shahaadooyinka, iyo alaabadayadu aad bay caan uga yihiin Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newland, Mexico, Philippine iwm .
Fukang waxay ku habayn kartaa adeegga mashiinka calaamadaynta otomaatiga ah ee soosaarayaasha baakadaha xirfadlayaasha ah
Ku saabsan FukangDongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd la aasaasay 1999, oo ku yaala Guangdong, Shiinaha oo daboolay 9000 mitir oo laba jibbaaran. Waxaan ku takhasusnay soo saarista iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee dhalooyinka PET iyo HDPE. kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, dhammaan agabku waa heerka cuntada oo ay dhaafeen FDA, EU, LFGB shahaado, iyo alaabtayada waa mid aad caan u ah Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newland, Mexico, Philippine iwm hdpe iyo PET dhalooyinka dawada waxaa loo isticmaalaa xirxirida alaabta daryeelka caafimaadka, nafaqeynta, kaabsalka, kaniiniyada iyo kaniiniyada, iwm. Xawaashyada, iwm. Dhalooyinkayada caaga ah waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedo gaar ah, sida saacada baakadaha, funaanad, alaabta lagu ciyaaro, hadiyado, dahabka, qalabka waraaqaha iyo alaabta elektarooniga ah Waxaan sidoo kale bixinaa adeegga OEM, sida samaynta caaryada cusub iyo daabacaadda calaamadda macaamiisha. design Waxaan si daacad ah kuugu soo dhawaynaynaa inaad nala shaqeyso.
Macaamiishayada USA ayaa ku dalbaday weelkan digirta qaxwaha 150g
Lacag bixinta soo socota ee saamiyada Dongguan Fukang Plastic Products Co., Ltd. la aasaasay 2009, oo ku yaalla magaalada Dongguan, Guangdong, Shiinaha oo daboolay 9000 mitir oo laba jibbaaran.Iyada oo leh 80 shaqaale ah oo xirfad leh, 20pcs mashiinnada duritaanka iyo mashiinnada wax-afuufidda. Waxaan ku takhasusnay soo saarista iyo dhoofinta noocyada kala duwan ee dhalooyinka PET iyo HDPE. Kuwaas oo inta badan loo isticmaalo farmashiyaha iyo warshadaha cuntada, shirkadeena waxay dhaaftay GB/T19001-2016/ISO9001:2015 shahaado maaraynta tayada, alaabtayadu waa heerka cuntada oo ay dhaafeen FDA,EU,LFGB,SGS certifications iyo alaabtayada ayaa aad caan u ah in Australia, Brazil, Canada, United States, India, New Zealand, Mexico, Philippine etc. oo ay ku jiraan cuntooyin kala duwan, sida nacnaca, buskudka, shukulaatada, lawska, subagga lawska iyo cuntada xawaashka, iwm dahabka, qalabka waraaqaha iyo alaabta elektarooniga ah Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga OEM, sida samaynta caaryada cusub iyo summada daabacaadda sida naqshadeynta macaamiisha Waxaan si daacad ah kuugu soo dhaweyneynaa inaad nala shaqeyso.
Xamuulka Fukang ka hor inta aan la rarin xamuulka xamuulka weyn
RaritaankaWaxqabad heer sare ah ayaa ka dhigaysa alaabtan mid ku habboon in loo isticmaalo dhammaan noocyada majaajilada, gaar ahaan baahida sii kordheysa ee walxaha qeexida sare.Iyo aqoontayada xirfadeed ayaa dammaanad qaadaya macaamiisheenna inay helaan alaabtayada sida ugu dhakhsaha badan!